ဝါးခယ်မ : ရွှေမှုံရတီရဲ့ ဖြေရှင်းချက်နဲ့ “မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်”
၀ါးခယ်မမြို.လေး၏ အဖြစ်အပျက် ၊အကြောင်းအရာ ၊သမိုင်းများကို လေ.လာသိရှိနိုင်စေရန် ၊ ဂုဏ်ယူနိုင်စေရန် ရှာဖွေစုဆောင်း တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး အခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ် ၊ ဗဟုသုတ ရဖွယ်ရာများ ကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း ၊ဤ ဘလော.မှတစ်ဆင်. အခြားဘလော.များ သတင်းဋ္ဌာနများကို အလွယ်တကူသွားရောက်လေ.လာနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း တရားဝင် မြူနီစပယ် မြို.အဖြစ်ရပ်တည်ခွင်.ရသည်.မြို.လေး၏ ၁၀၆ နှစ်ပြည်.မွေးနေ. ဖြစ်သော၁-၁၀-၂၀၁၂ တွင်ဝါးခယ်မ ဘလော.ကို စတင်ဖွဲ.တည်ပြိး ၁၂ ရက် ၁၂ လ ၂၀၁၂ တွင် အပြီးသတ်လွှင်.တင်သည်
ရွှေမှုံရတီရဲ့ ဖြေရှင်းချက်နဲ့ “မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်”
သရုပ်ဆောင် ရွှေမှုံရတီ (ဓာတ်ပုံ- နဒီထိုက်)
“မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်” ဇာတ်ကားထွက်ရှိပြီး တပတ်ကျော် အကြာမှာ မြန်မာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်သံတွေ အတော် ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၉ တန်းကျောင်းသူလေး တယောက်ကို လိင်အသားပေး ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ရိုက်သင့်သလား၊ မြန်မာဇာတ်ကားတွေက ဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီလား၊ ဒီအခန်းတွေက မပါသင့်ဘူး ဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံတွေ ကြားလာရပါတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာ ရွှေမှုန်ရတီက နေဆန်းနဲ့ စိုးမြတ်သူဇာတို့ရဲ့ ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးကို ထိန်းပေးတဲ့အိမ်မှာ ရွှေမှုံရတီရဲ့ ချစ်သူ ညီထွဋ်ခေါင်ရောက်လာပြီး ချစ်သူချင်းနမ်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း၊ နေတိုးစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီး ရွေမှုံရတီကို အလိုမတူဘဲ သားမယား ပြုကျင့်ခန်းတွေကြောင့် ဝေဖန်ရေးတွေ လှိုင်းထသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ရွှေမှုံရတီက ဧရာဝတီကို ဇာတ်ရုပ်အတိုင်း သရုပ်ဆောင်ရတာလို့ ပြောပါတယ်။
မေး။ ။ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေ တော်တော်ပြောနေကြတယ်။ ရွှေမှုံ ဘာပြောချင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါ ရွှေမှုံလဲ မသိဘူး။ ကိုယ့်ကို မနာလိုတဲ့လူလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ အကျင့်ယုတ်တဲ့ လူက အင်တာနက်မှာ တင်လိုက်တာ။ ဒီလို ရိုက်တဲ့ပုံစံကို တလောကလုံး သိသလို ပရိတ်သတ် အားလုံးလည်း သိတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေက နားလည်တယ်။ အဲဒါကို အကျင့်ယုတ်တဲ့သူက လုပ်တော့ ပရိတ်သတ်လည်း နည်းနည်းခေါင်းစားစရာ ဖြစ်လာတယ်။ သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူတဲ့။ ကိုယ်က တူအောင် သရုပ်ဆောင်ရတာ။ တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ သရုပ်ဆောင်ရင် Mood သွင်းရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ သဘာဝစိတ်ရယ်၊ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ စိတ်ရယ်ကို သွင်းရတာလေ။ ဒီလိုလုပ်တာ ဒါရိုက်တာကိုသော်လည်းကောင်း၊ မင်းသားကိုသော်လည်းကောင်း၊ မင်းသမီးကိုသော်လည်းကောင်း အကျင့်ယုတ်ချင်လို့ကို လုပ်တာပါ။ ရွှေမှုံတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက အများကြီးပါ။ ဒါ လိမ်ရိုက်ထားတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတာပဲ။
မေး။ ။ ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ ဒီကားက ပိုပေါက်သွားတယ် မဟုတ်လား။
ဖြေ။ ။ ဒီကားက ပေါက်တယ်။ ရွှေမှုံ ကတော့ ဘာမှဖြေရှင်းမနေဘူး။ လိပ်ပြာသန့်တယ်။ ဒါရိုက်တာရယ်၊ မင်းသမီးရယ်၊ မင်းသားရယ် ၃ ယောက်တည်း ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကား မဟုတ်ဘူး။ လူအယောက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိတဲ့ ရိုက်ကွင်းမှာ ရိုက်တာလေ။ ဒါရိုက်တာ ခိုင်းသမျှ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာ မရှိအောင် ရွှေမှုံ ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်တယ်။
မေး။ ။ ဒီလို ဇာတ်ကားကို ရိုက်ဖို့ ကိုလူမင်းက သင်ပေးးတာလား။
ဖြေ။ ။ အဲလိုတော့ မရှိပါဘူး။ ရိုက်ကွင်းတခုကို ရောက်သွားတယ်။ ဒါရိုက်တာက ဒီလိုဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး လုပ်ရဲမလား မေးတယ်။ ဆရာရယ် ဘာလို့မလုပ်ရဲရမှာလဲလို့။ သရုပ်ဆောင်အသစ် တယောက်အနေနဲ့ လုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ကြည့်တယ်။ အဆင်ပြေသွားတော့ ကောင်းတာပေ့ါ။ ပရိတ်သတ်တွေက အဲ့လောက် မဆိုးရွားဘူး။ နားလည်တယ်။
ဒါရိုက်တာက ခိုင်းတာဆိုတော့ ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးက လိုအပ်လို့ကို ထည့်ရတာပေါ့။ ပရိတ်သတ်တွေအမြင်က ကလေးလေးကို ဘာလို့ခိုင်းတာလဲပေါ့။ ဒါရိုက်တာကို အပြစ်တင်ကြတယ်။ ရွှေမှုံကိုတော့ သိပ်အပြစ် မပြောကြဘူး။ ရွေမှုံကတော့ ဒါရိုက်တာကိုပဲ အားနာတယ်။ သူက ခိုင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီဇာတ် ဒီဖရိန်က မလွဲမသွေလုပ်ရမှာမို့ သူလည်းခိုင်းတာ။ သူတို့လည်း အဲ့ဒီအခန်းကို ရိုက်ဖို့ အရမ်းအားနာကြတယ်။ ဇာတ်သဘောအရ ရိုက်ရတာ ရွှေမှုံကို ထပ်ခါထပ်ခါမေးပြီးမှ ရိုက်တာပါ။ ငါ ဒါရိုက်တာ ဒီပုံစံရိုက်ရမယ်ဆိုပြီး ရိုက်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်ချင်လို့ ဒါတွေကို အပြစ်တင်နေကြမှန်းလည်း မသိလို့ပါ။
မေး။ ။ ဒီ ဇာတ်ကားကို နယ်ဘက်တွေကရော လက်ခံကြပါ့မလား။
ဖြေ။ ။ နယ်က ကြိုက်တယ်။ ဇာတ်လမ်းအရ ဘယ်သူမှ မရိုက်ဘူးတဲ့ပုံစံ ရိုက်ထားတာ။ နယ်က လက်ခံကြပါတယ်။ မနာလိုသူတယောက် လုပ်လိုက်လို့ ဒီလို ဖြစ်တာ။လုပ်နိုင်လည်း တရက်ပေ့ါ။ သူလုပ်လို့ လူတိုင်းကြည့် ဖြစ်တယ်။ ဆိုင်တက်တာ များတယ်။ ရွှေမှုံ ဝမ်းသာတယ်။ ရွှေမှုံ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ပရိတ်သတ်ကိုလည်း ယုံကြည်ပါလို့ ပြောချင်တယ်။
မေး။ ။ အနုပညာလောကထဲ စဝင်တော့ နေတိုး၊ ခန့်စည်သူ၊ ပြေတီဦး၊ မြင့်မြတ်၊ ဝိုင်း မင်းသား၅ ယောက်နဲ့ စာချုပ်ထားတယ်နော်။ အခုရော။
ဖြေ။ ။ မင်းသား ၅ ယောက်နဲ့ စာချုပ်တာ ၁ နှစ်ပြည့်သွားပြီ။ ၁ နှစ်အတွင်း မင်းသား ၅ ယောက်နဲ့ပဲ ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ရမယ်ပေ့ါ။ အခု ပြည့်သွားတော့ မင်းသားတွေက အနုပညာကြေးလည်း တိုးပေးတဲ့အပြင် အဲ့ဒီ ၅ ယောက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ တိုက်တွေမှာ ရိုက်ခွင့်ပေးထားတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်မင်းသားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်လား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ မင်းသား ၅ ယောက် နဲ့ဆိုင်တဲ့ တိုက်က ရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ ရိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ အပြင်မင်းသားနဲ့လည်း ရိုက်ခွင့်ပေးတယ်။ ဆရာတွေက ရွှေမှုံ နစ်နာမှာ စိုးလို့။
မေး။ ။ အခု လက်ရှိ ပညာရေးကရော။
ဖြေ။ ။ ၁၀ တန်း ကျောင်းစာတွေ သင်နေပါတယ်။ ပညာရေးတော့ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် လုပ်ရမှာပေ့ါ။ ဆရာဝန်တော့ မဖြစ်ချင်ဘူး၊ အပ်ကြောက်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာတော့ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ရွှေမှုံရတီဟာ ၇ တန်းကျောင်းသူဘဝက ဂျွန်လွင်ဆီမှာ မော်ဒယ်သင်တန်း တက်ရောက်ရင်း ၂၀၁၂ မှာ မင်းသား ၅ ဦးက မင်းသမီးရှားပါးလို့ မင်းသမီးသစ် တင်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရွှေမှုံရတီ၊ ယုသန္တာတင်၊ အိချောပိုတို့ ၃ ဦးကို စာချုပ်နဲ့ စင်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ မင်းသမီးသစ် ၃ ယောက်ထဲမှာ ရွှေမှုံရတီကို ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ၊ ဗီစီဒီတွေ၊ ကြော်ငြာတွေမှာ ပိုတွေ့နေရပါတယ်။
အကယ်ဒမီလူမင်းက သူတင်တဲ့မင်းသမီးကို နာမည်ကြီးအောင် ဒီလို သင်ပေးထားတာလား၊ ဒီဇာတ်ကားက လူမင်းရဲ့ အကြံဥာဏ်တွေလားဆိုပြီး ဝေဖန်နေသူတွေကို သရုပ်ဆောင် လူမင်းက ”ကျနော် ဒီဇာတ်ကားကို မကြည့်ရသေးပါဘူး။ မကြည့်ရသေးတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ မဝေဖန်နိုင်သေးပါဘူး။ ကျနော် အခု တခုခုပြောလိုက်ရင် မှားသွားမှာစိုးလို့ ဘာမှ မပြောပါရစေနဲ့” လို့ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဒု ဥက္ကဌလည်းဖြစ်တဲ့ လူမင်းက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ ကြိုက်တဲ့လူရှိသလို မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ “ကောင်မလေး သရုပ်ဆောင်တာ ကြိုက်ပါတယ်။ အသစ်ထဲမှာ မဆိုးဘူးပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက မြန်မာကားဆိုပြီး ငှားကြည့်တယ်။ အိမ်မှာ မိသားစုနဲ့ ကြည့်မိတယ်။ ဒီလို ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ပါလာမယ်လို့ မထင်ဘူးလေ၊ ဇာတ်လမ်းက ဆန်းပါတယ်။ ခေတ်မီတယ်ဆိုရင်လည်း ဇာတ်လမ်းနဲ့ နေရာတွေ အရင် ခေတ်မီအောင်လုပ်ပါဦး။ ပြီးမှ ဒီလို အခန်းတွေအတွက် စဉ်းစားပေါ့ ” လို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ လေးထောင့်ကန် ရပ်ကွက်နေ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း မသဲသဲမြင့်မိုရ်ဦး ကပြောပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကား ရိုက်ကူးသူ ဒါရိုက်တာ ဝင်းထွန်းထွန်းက “ကျနော်က ပုံစံတူဖြစ်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းက ခွဲထွက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ပရိတ်သတ် အမြင်တမျိုးဖြစ်မယ် ဆိုရင်လည်း ကျနော် စိတ် တကယ်ကို မကောင်းပါဘူး။ စေတနာ အမှားပါ” လို့ သူ့ခံစားချက်ကို ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီဇာတ်ကားကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိတဲ့ အောင်တိုင်းကျော် ထုတ်လုပ်ရေးကို ဈေးကွက်အတွင်း အနေအထား စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ”နယ်မှာက သိပ်မကြိုက်ကြဘူး၊ ပုံစံပြောင်း ရိုက်ထားလို့လေ၊ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာတော့ အဲ့ဒီဇာတ်ကားကို ပို အားပေးကြတယ်။ ကြိုက်ကြတယ်’” လို့ အောင်တိုင်းကျော်က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
“မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်” ဇာတ်ကားမှာ ဒါရိုက်တာ ဝင်းထွန်းထွန်း၊ သရုပ်ဆောင် နေတိုး၊ နေဆန်း၊ ညီထွဋ်ခေါင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ရွှေမှုံရတီတို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ အောင်တိုင်းကျော် ဖြန့်ချိရေးကနေ ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
မူရင်း Link ; http://burma.irrawaddy.org/archives/39417
ဆက်စပ်ဖတ်ရှု၇န် - ထိုကားမျိုးတော. အားမပေးလိုပါ (မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ် )
Posted by ဇာမဏီ at 9:25 AM
Labels: နာမည်ကျော်တွေ ဘာတွေလုပ်, အင်တာဗျုးများ
ဒီBlog လေးဆီရောက်ရှိပြီး သူပေါင်း
ယခု Labels & Blog Archive များအောက်တွင် လာရောက်သော မိတ်ဆွေတို. မိမိတို. နှစ်သက်ဝါသနာပါရာအလိုက် သွားရောက်လေ.လာနိုင်၇န် Blog & Website Adress များ စုစည်းပေးထားပါသည်...ထို Link များမှ တိုက်ရိုက်သွားရောက်လေ.လာနိုင်ပါသည်
မြို.လေးဆီ အလည်အပတ် လာရောက်ကြသူများအနေဖြင်. ဝေဖန် ရေးသား အကြံပြု ဆွေးနွေးလိုသည်များ ရှိပါက hotsnow10@gmail.com သို. ဆက်သွယ်ပေးပို.နိုင်ပါသည်
၀ါးခယ်မ မြို. ရှိ ဘုရားစေတီများနှင်. သမိုင်းအကျဉ်း (16)
Ayeyawady United FC (48)
Cocktail of Wakema and Myanmar (26)
Facebook အကြောင်း သိကောင်းစရာများ (16)
How.. Who and What Happen Now ? (34)
ICT Knowledge (2)
International Knowledge (2)
Maubin GTI GTC TU (14)
Myanmar Sea Game (20)
Secluded Serene Avenue of WKA (11)
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဆိုင်ရာ များ (27)
ချက်ကြမယ်ဟေ. ကောင်းကောင်း (9)
စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ လက်နက် ယာဉ် စနစ်နှင်. စာစုများ (100)
စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းများ (70)
ဇာတိဖွားတို.၏ လက်ရာမွန်များ (40)
ထူးချွန် ထင်ရှား ဇာတိဖွား နှင်. ထက်မြက် အောင်မြင် အနွယ်ဝင် များ (35)
ထူးခြားဆန်းပြား အပင်နှင်.သတ္တ၀ါများ (10)
နမ်လောက ဆိုင်ရာ များ (31)
နာမည်မကျော်သော်လည်း လူသိများခဲ့ကြသည် (3)
နာမည်ကျော် ဒေသန္တရ ပွဲတော်များ နှင်. သမိုင်း (5)
နာမည်ကျော်တွေ ဘာတွေလုပ် (62)
နိုင်ငံတကာ Hot News (10)
ဗွီဒီယို များ (1)
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအခြေခံဗဟုသုတ များ..ဂုဏ်ယူဖွယ်နှင်. စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများ (22)
ပြည်ပ အလုပ်သမား ရေးရာ (13)
မြန်မာ.ဓလေ. ရိုးရာ နှင်.ပွဲတော်များ (4)
မြန်မာပြည်ရောက် နာမည်ကျော်များ (1)
မြို.လေးရဲ. ဓလေ.နှင်. ပွဲတော်များ (28)
မြို.လေးရဲ. သတင်းများ (84)
မြို.လေးနှင်. ပတ်သက်ဖွဲ.သီ စာပန်းချီ (51)
မြို.လေးနှင်. သူ၏ မိတ်ဆွေများ (29)
ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း (55)
ဘဂါင်္လီတို.အကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း (14)
ဘာသာရေးအသိ နှင်. သတိ ရှိကြရ လိမ်.မည် (22)
မမေ.နိုင်စရာ ဒေသထွက် အစားအစာ များနှင်.အမေ.ထမင်း စားပွဲ (8)
ယုံချင်ယုံ - မယုံချင်နေ (6)
သမိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ များ (23)
သမိုင်းဆိုင်ရာ လေ.လာမိသမျှ (၀ါးခယ်မ ) (11)
သူတို. ပြောသော ယနေ. မြန်မာပြည် (54)
ဟာသ ရပ်ကွက် (15)
အတွေးအမြင်.နှင်. သုတ ရသ စာစုများ (25)
အနုပညာ ရေးရာ (45)
တွေ.မြင်ကြားသိ ဖတ်မိကြည်.မိနားထောင်မိသည်များ (10)
ဗေဒင်.နက္ခတ်.စိတ်ပညာ ဆိုင်ရာများ (13)
ရေခြားမြေခြား က မြို.လေးရဲ. အငွေ.အသက်များ (4)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (8)
အော်...ဒီလိုမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်တဲ့ (28)
နွယ်မြက် သစ်ပင် ဆေးဘက်ဝင်၏ (14)
ပွင်.ဖတ်မစုံသေးသော်လည်း ညှာတန် နွမ်းနှင်.နေခဲ့ပြီ
မြန်မာ. တပ်မတော် - လေ (၁)
မြန်မာ. တပ်မတော် - လေ (၂)
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက် နှင်. စိန့်မေရီ ကာသီဒြ...
ဆွမ်းမစားတော့ဘဲ ပြန်ကြွခဲ့သည့် ဆရာတော်
ပြည်လမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း တစ်လမ်းမောင်း ဘတ်(စ...
အာဆီယံ ဂီတပွဲအပြီး ကျားပေါက် နဲ. အင်တာဗျုး
RED WAVES ထုတ်ပြန်ချက် (၂၀၁၃ -မေလ - ၂၅ ရက်)
RED WAVES ကျေးဇူးတင်လွှာ (၂၀၁၃ - မေ- ၂၅ )
အငြင်းပွားဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဖြင်. ရယူသွားသော ၃...
စက်တော်ရာက ၀ါးခယ်မ သားတို. အလှု
ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
အိုင်အိုဝါ က Burma Town
ရဲလေးနဲ့ အေးမြအောင်တို့ရဲ့ ချစ်ခွန်းဖွဲ့စကားသံများ...
ကျားပေါက်တို.ရဲ. အာဆီယံ ဂီတပွဲ အတွေ.အကြုံ
နာမည်ကျော်ခဲ့သော အို7တောင်ကုန်း (ယိုးဒယား - မြန်...
ဤသို. စွန်.လွှတ်ခဲ့ကြရသည် (ယိုးဒယား မြန်မာ နယ်စပ်)
လက်သန်းချိတ် ကတိပေးခြင်း အဓိပ္ပါယ်
Facebook အသုံးပြုသူတို့ သိရှိသင့်သည့် ကျင့်ဝတ် စည်...
အမျိုးသမီး၃ ဦးအား နှစ်ပေါင်းများစွာ အဓမ္မ ကျင်.ခဲ့...
ကဲ ၀ါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါး စမ်းချက်ကြည်.ကြ မလား
မြို.လေးနှင်. မုန်.ဟင်းခါး ယဉ်ကျေးမှု ( ၀ါးခယ်မ မု...
ကလေးသူငယ် လိင်စော်ကားမှု (Child sexual abuse )
ခေါင်း ပန်း လှန်ပြီး မြို.တော်ဝန် ရွေးပါသတဲ့
အထူးသတိ -မုန်တိုင်း အနီရောင်အဆင်.ပြောင်းပြီ -ပထမဆံ...
မြသိန်းတန် စေတီတော် ဘက်စုံ မွမ်းမံခြင်း ဓါတ်ပုံ မှ...
Red Waves Fan Club ၏ ပထမအကြိမ် ကုသိုလ်ပြုပွဲ အကြော...
ရွှေမှုံရတီရဲ့ ဖြေရှင်းချက်နဲ့ “မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်...
နပိုလီယံ၏လက်စွပ်နှင့် ဖရန့်ဂျိုးဇက်၏ ဆံပင်ခွေကို ဗ...
Myanmar Famous Mohingar
ပထမရာသီဝက် နောက်ဆုံးပွဲ (ဧရာဝတီ ၂- Southern Myanma...
ဂိတသင်တန်းဆင်းပွဲ - စာပြန်ပွဲ နှင်. တိုက်ရော.ပြုတ်...
Amazing Art (or) Monastery of Yoke Sone Kyaung
မုန်တိုင်းအရောင်. သတ်မှတ်ပုံများနှင်. Mahasen မုန...
တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားထံ ပေးပို့ထားသောြ...
ဧရာဝတီ လူငယ်အသင်း၏ အဖွင်.ပွဲ
ထိုကားမျိုးတော. အားမပေးလိုပါ (မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်...
ရေဗက္ကာဝင်း မင်္ဂလာ သတင်း
သင်္ကြန် နှင်.အမုန်းခံ အတွေးစများ
အဆိုတော် ရဲလေးရဲ. မင်္ဂလာ သတင်း နှင်. သူကိုယ်တိုင် အ...
ဒိုင်ယာရီရဲ့ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ - တာရာမင်းဝေ
7 Romantic Kiss
800 Mhz တန်ဖိုးနည်းဖုန်း ရဲ. တေးသံစုံ နဲ. မြို.လေ...
ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကို လုံခြုံရေးကောင်းအောင် လုပ်န...
သတိ ဆိုတာ ပိုတယ်မရှိ (အင်ဒို ပြဿနာများ၏ နောက်ဆက်တွ...
ယိုးဒယား-မြန်မာ နယ်စပ်က ကျွန်းသုံးကျွန်း ပြဿနာ ပြန...
ပီနန် ဆရာတော် ကြီး ဇာတိမြို.လေးဆီ ကြွရောက်တော်မူ
ချစ်စကိုသာ ရှည်စေချင်ပါသည် (အင်ဒိုလှုပ်ရှားမှုများ...
အမျိုးသမီးများ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ရခြင်း အကြောင်းရင်း ...
အံ့ဖွယ်ရာအစွမ်း ရှိတဲ့ ဂေါ်ရခါးသီး ခေါ် ဆူကာသီး
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ အတွင်းရှိ မြန်မာ သံရုံးကို ဗ...
Facebook ပေါ်က ပြုံးချင်စရာ လေးတွေ
ဘုရားစေတီများ..တရားရိပ်သာများ ၏ Blog & Website များ
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ နှင်. တရားတော်များ
ဓမ္မရံသီ စာမျက်နှာ (တရားတော်များ Download ရယူနိုင်သည်)..တရားစာအုပ်များ
Ultimate Gateway to Myanmar Vippassana Dhamma Talks, Dhamma MP3, Dhamma Ebooks, Dhamma Videos
Dhamma Video (တရားတော်များကို အရုပ်အသံတွဲလျှက် နာယူနိုင်ပါသည်)
မေတ္တာရိပ် (တရားစာအုပ်များ Download ရယူနိုင်ပါသည်)
လူ့ ဘ၀ကြီး၏အကြီးမားဆုံးသော အသိတရား(၁၄)ချက်
သုတေသန သရုပ်ပြ အဘိဓါန်
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိ..တရားတော် နှင်. အလုပ်ပေးတရားများ
?????????????????????????? ?????????? ???????????
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေး (ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သတိပြုဖွယ်ရာများ)
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် နှင့်ဘုရားရှိခိုး(Holy Scripts))
ဓမ္မပဒ ပါဠိတော် မြန်မာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်
သိတဂူ ဆရာတော်ကြိး၏ တရားတော်များ Download ရယူနိုင်ပါသည်
တရားစာအုပ်များ Download ရယူနိုင်ပြီးနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြိးမျာ၏ တရားအားလုံးနီးပါး တိုက်ရိုက်နာယူနိုင်ပါသည်
ဆရာတော်များ၏ Website နှင်. Blog များ
Music Live Show in Naypyidaw,Myanmar (7-8-.2.2019)
ဓမ္မအလင်းရောင် (ဥိးကောဝိဒ - မြိတ် )
ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင် ပညိဿရ
ပိုင်းလော.ဆရာတော်- အရှင်ဇေယျ ပဏ္ဍိတ
နိုင်ငံတော် အဆင်.တရားဝင် လွှင်.တင်ထားသော Website များ
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ | ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံး Website
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဋ္ဌာန
On Line ကနေ အောင်ဘာလေထီ တိုက်ရအောင်
Work.com.mm .ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်များရှာ၇န်
JOB | ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်များ ရှာ၇န်
y8.com - Game အသေးတွေစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်
Princess Back to College
Miniclip. Game အသေးလေးတွေ
Touch Game တွေပါ Down နိုင်ပါတယ်
Daemon X Machina - Crazy Boss Battles Gameplay
Mobile Flash Games ဖုန်းအတွက် Game
Torn – လူကြိုက်အများဆုံး On Line Game
Gamezone: Game တွေ Download လုပ်ချင်ရင်
သတင်းဦးစားပေး Blog နှင်. Website များ
တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကို စိုးရိမ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့ ထောက်ပြ - (Zawgyi)⤵⤵⤵ မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ရက်ကြာ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်းဖျင်ရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးသွားတဲ့ စီမံကိန်...
တရုတျ သမ်မတ ခရီးစဉျတှငျ ကခငျြဒုက်ခသညျ ကူညီရေး လကျမှတျထိုးမှု အပဈရပျစာခြုပျ ရှပွေ့ေးဟု ဆို - တရုတျနှငျ့ မွနျမာကွား ကခငျြဒုက်ခသညျမြား ကူညီရေး စာလှာ လကျမှတျထိုးခွငျးသညျ ကခငျြ ပွညျနယျ တှငျ အပဈရပျစာခြုပျ ခြုပျဆိုတော့မညျ့ ရှပွေ့ေး သတငျးစကား ဖွဈသညျဟ...
လက်သည်းဆိုးပြီး (၁၀) နာရီအကြာမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ - အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများရဲ့ အကြိုက်ကတော့ လက်သည်းကို ကာလာအမျိုးမျိုးဆိုးနေရတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လို့ လက်သည်းဆိုးပြီးတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၊ အပြင်ဆိုးကျိုးေ...
သတင်းစုံ / ရသစုံ ဖတ်စရာနေရာများ
Shwe Chit Thu | ShweChitThu.com | ရွှေချစ်သူ
Pho Thu Taw | PhoThuTaw.com | ဖိုးသူတော်
Lwin Pyin | လွင်ပြင် သတင်း
မြန်မာသတင်းစာ..ဂျာနယ်..မဂ္ဂဇင်း Webite များ
မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၉-၄-၂၀၁၉) - မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၉-၄-၂၀၁၉) - * Download Links* - *MediaFire* - *Scribd* Myawady Daily 19-4-2019 by on Scribd
The Daily Eleven Newspaper (12-Dec-2018) - Enjoyafull-featured replica of Eleven Media Group on your tablet, smartphone or laptop ePaper isareplica of with all the stories, photos and artwork ...
Democracy Today သတင်းစာ
မငျးဘူးတှငျ ရာသီဥတုဆိုးရှား၍ တပျမတျောလယောဉျ နှဈစီးပကျြကြ လယောဉျမောငျးပိုကျလော့တို့ သဆေုံး - မငျးဘူးတှငျ ရာသီဥတုဆိုးရှား၍ တပျမတျောလယောဉျ နှဈစီးပကျြကြ လယောဉျမောငျးပိုကျလော့တို့ သဆေုံး
Web Services - Subscription type: -3Months
The Yangon Time
ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ရောက်ရှိနေသည့် ရေဘေးသင့်များ ရေကျချိန် နေအိမ်များသို့ စနစ်တကျပြန်လည်ပို့ဆောင်နေ - [image: ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ရောက်ရှိနေသည့် ရေဘေးသင့်များ ရေကျချိန် နေအိမ်များသို့ စနစ်တကျပြန်လည်ပို့ဆောင်နေ] ကလေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၄-စစ်ကိုင်...
Flower News & Yangon Time
Hotnews Weekly Journal
7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
- စံတော်ချိန် နေ့စဉ်သတင်းစာ
ပြည်မြန်မာ / Good Health
မြန်မာ နှင်. နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာန များ
BBC မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်
အခှနျနဲ့ အကွှေးမရလို့ ရနျကုနျတိုငျး ဝငျငှေ သနျးတဈသိနျးခှဲလြော့ - ဝငျငှတှေကေို မပေးသှငျးနိုငျတာ၊ စီမံကိနျးတှမေပွီးမွောကျတာ၊ ကွှေးတောငျးယူလို့ မရတာတှေ ကွောငျ့ ဝငျငှတှေေ လြော့နညျးရရှိတာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
သြဇီပြည်နယ်(၂)ခုမှာ သဲမုန်တိုင်းတိုက် - (Zawgyi/Unicode) သြဇီပြည်နယ်(၂)ခုမှာ သဲမုန်တိုင်းတိုက် သွဇီပွညျနယျ(၂)ခုမှာ သဲမုနျတိုငျးတိုကျ
DVB | DVB
တပျမတျောက ဒရုနျးမြားစလှေတျထောကျလှမျးမှု ကအေနျယူကနျ့ကှကျ - ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး (ကအေနျယူ) တပျမဟာ၊ တပျရငျးဌာနခြုပျစခနျးတှမှော မွနျမာတပျမတျောဘကျက ဒရုနျးတှေ စလှေတျပွီး စုံစမျးထောကျလှမျးတဲ့အပျေါ ကအေနျယူ တပျမဟာ[.....
Myanmar International TV
M R T V - 4
တိုင်းရင်းသား သတင်းဌာန နှင်. တိုင်းရင်းသား Blog များ
ကချင်သတင်း - KIC News
Radio Karen: A lot of fish died at Mayin Kone Village, near Taung Kalay Mountain. -
ချင်းတိုင်းရင်းသား ဘလော. Pu Zo Net
Chin Poetry + Audio - https://www.poetryinternational.org/media/original/35/chin.mp3 https://www.poetryinternational.org/media/original/35/chin.mp3 © 2009, Mya Kabyar From: C...
ျဝလ္ဒျုှုဢ္မျြှူငျးသဝျး - ပ္မျုျှု္မျှး္ဓြှုဝျြးတှေူ ပဵ္မျတ္မျှု တြှတေပ္ဒျူးပှငျလ္ဒျုှုဢ္မျှေ္မြှုတဵ္မျး္ဓိူဝျးဝျြး္ဓြှုလြှု တြှတေပ္မျတ္ဂငျြးှူ္မူမျှ္ဒူတျှူလ္ဒျုှု ဢ္မျှ လ္ဒျုြှုဵ္မျး္ဒ္ဗျူး္ဓြှု။ေ...
ဘယ်သူမူးယစ်ဆေးဝါးပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာ့တပ်မတော် ပိုသိမယ် …. - “ဘယ်သူမူးယစ်ဆေးဝါးပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာ့တပ်မတော် က ကျနော်တို့ထက် ပိုသိပါလိမ့်မယ်” ... လို့ ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးပဲလစ်ဟော်တယ်မှာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ ...
KNLA တပ်မဟာ(၅)တွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦး မြေမြှုပ်မိုင်း နင်းမိပြီး တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ - မေလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)၏ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KNLA) တပ်မဟာ(၅)ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ဖာပ...
မျှော်လင့်ရသော အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအထောက်အကူပြူ ကွန်ရက် ထုတ်ပြန်ချက် (၁) - Transitional Statement (1) Burmese Type the rest of your post here.
မြွေအကိုက်ခံရလျှင် အချိန်မီအသက်ကယ်နိုင်ရန် ဒါတွေလုပ်ဆောင်ပေးပါ - (၁) လူနာကိုစိတ်အေးအေးထားဖို့ ပြောပါ။ ငါတို့ဆေးရုံသို့ အချိန်မီပို့ပေးပါ့မယ် စသဖြင့် အားပေးစကားပြောပါ။ (၂) မြွေကိုက်ခံရသည့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို မလှုပ်ရ...
မန်စီမြို့နယ်အတွင်း ကေအိုင်အိုအဖွဲ့မှ သစ်ခိုးထုတ် ရန် ဒေသခံရွာ သားများ အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် - မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၅ ကချင်ပြည်နယ်၊မန်စီမြို့နယ်၊ကိုင်ထိပ်ကျေးရွာရှိ ဒေသခံရွာသားများအား ကေအိုင်အေအဖွဲ့မှ ဒေသအတွင်း သစ်များအား တစ်ဖက်နိုင်ငံ သို့ မှောင် ခိုရေ...
ကရင်တိုင်းရင်းသား ဘလော. - ကံသ်ကညံ
ထိုင်းအစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူတွ မဲရုံတွေကို ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြ - ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မဲပေးမယ့်နေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ မရှိနိုင်တဲ့လူတွေအတွက် ကနဦး မဲပေးမှုတွေ ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက်က စတင်နေလို့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ...
ကချင်ပြည်နယ် သတင်း - MYUTSAWMYIT
ကန္တာရ၀တီတိုင်း ( မ် )
ကိုယ်ပိုင်နာမည် များ (သို.)လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဆိုင်ရာတည်ထောင်ကြသော Blog များ
အီတလီအတှကျ ကတြဲ့မကျြရညျ - ဒေါကျတာလှဏျးဆှေ
ASEAN-AIPA (24th ASEAN SUMMIT)
ဦးရဲထွဋ် ( မှုးဇော် - Hmu Zaw )
အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဒီမိုကရေစီအစဉ်အလာ (၅)
ဦးအောင်ကြည် (ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး- ငြိမ်း)
တဲရော. .လက္ခဏာ..ဗေဒင် ..ဖုန်းရွှေ.၀ါသနာရှင်များအတွက်
MOODY - အမေရိကန်မှာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတော့ နီးလာပြီ…။ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ဝါသနာပါလို့လုပ်တာလား၊ စေတနာပါလို့လုပ်တာလား၊ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေလွှမ်းမိုးပြီး လုပ်တာလားဆ...
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနှစ်) - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ ( ၁၃၈၀ခုနှစ်) ============================== ယခုနှစ် ၁၃၈၀ခုနှစ်ကတော့ ဗုဒ္ဓဟူး ရာဟု ဖွား များစွာအတွက် ... ဘ၀ရုန်းကန်ရမှုတွေ ..အ...
တဲရော..အဆောင်..အင်း နှင်. ဗေဒင်
Koala - hanhhkh ' ''fdfd fdfdfdfd fd
အရာရာတိုင်းဆီသို့ (၁) - ဖုန်းရွှေပညာရပ်ရဲ့ နက်နဲ အသေးစိတ်တဲ့ သဘောတရားတွေကို မလေ့လာခင်မှာ မသိမဖြစ် သိသင့်တဲ့ ဖုန်းရွှေရဲ့ အခြေခံ သဘောတရား ၃ ရပ် (3 Basic Principles) ကို လေ့လာကြပါမယ...
ထက်အောင်လှိုင်..စိတ်ပညာ..နှင်. ၈မ္ဘီရ ကျင်.စဉ်များ
မြန်မာ. နက္ခတ်ဗေဒ- ဆရာဦးမောင်မောင်မြင်.
ယခု ရက်သတ္တပတ်အတွင်း လူဖတ်အများဆုံး Post များ
နေ.လည် နေက ပြင်းနေပေမယ်. ထမင်.ချိုင်.တွေ အိပ်ရာတွေ သယ်လို. လူ တစ်ချို.ကတော. လှေဆိပ်တွေကနေ မြို.ထဲက အသိအိမ်တွေဆီ သွားနေကြလေရဲ. ယော...
၂၀၁၄ ဦးရှင်ကြီး ပွဲ
ထေရ၀ါဒစစ်စစ် တွင် တော.ဤသို.သော ပွဲလမ်းသဘင်မျိုး သည် သိပ်နှစ်လိုဖွယ် မဟုတ်သော်လည်း ဒေသန္တရ ယုံကြည်မှု ဆိုင်ရာ များမို. ဝေဖန်ေ...
အရက် အကြောင်း သိကောင်းစရာ
မိရိုးဖလာ အရက်ချက်နည်း အရက်ဆိုတဲ့ Ethyl Alcohol ( အီသိုင်းလ် အယ်လ်ကိုဟော ) ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဘီယာ အပျော့မှာ ၃ ရာခု...
မေး။။ ဆရာခင်ဗျာ အခုနောက်ပိုင်းမှာ မြဝတီသတင်းစာ ကျန်းမာ သုတ ပရိသတ်တွေ ထဲကနေ သွေးလေးဖက်နာ အကြောင်း မေးမြန်း တင်ဆက်ပေးပါလို့ စာရေးေ တာ...
မြို.လေးတွင် အရှင်နှစ်ပါး ပူဇော်ပသပွဲဆိုသည်က ဇာတိဖွားများ ၊ ဇာတိသားများ သတိတရ ရှိတတ်သော ပွဲတော် တစ်ခုဖြစ်သည် ။ ဆေးရုံရှေ. တွင်ကျင...
တဂိုး ကဗျာ များ
၁။ စမ်းရေပေါ်တင်ပြီး စက္ကူလှေတို့ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကျနော် မျှောခဲ့သည်။ ကျနော့်အမည်နှင့် ကျနော့်ကျေးရွာကိုလည်း စက္ကူလှေပေါ်မှာ စ...
၂၀၁၄သင်္ကြန် ဘယ်သူတွေ ဘယ်မှာ ရှိလို. ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ သိစေဖို.
ဒီသင်္ကြန် ဘယ်အနုပညာရှင်တွေ ဘယ်မှာရှိလို. ဘာတွေ လုပ်ကြမယ် ဆိုတာလေး လက်လှမ်းမှီသမျှ စုဆောင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။ ဇော်ဝင်းထွဋ် အစ်ကိုကေ...
သိုက်အိမ်လေလား၊ တိုက်အိမ်လား ?
ကျွန်တော်တို့က မန္တလေးမှာမွေး၊ မန္တလေးမှာကြီး(အသက်ကိုပြောပါတယ်)၊ မန္တလေးမှာပဲ ခုချိန်ထိနေနေကြတာဗျ။ ကဲပါ.... ကျွန်တော့်ဆွေမျိုးတွေ၊ က...
ကေအေတီ ရဲ.ဈာပန (သို.) ကြောင်စုန်း ရဲ.အပြန်
တေးရေး ကေအေတီ (ကဗျာဆရာ ကျော်အောင်သစ်) ရဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို ဇွန်လ ၃ ရက်နေ.ညနေ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ် နီးပါးမှာ ရေဝေးသုဿာန်မှာ သင်္ဂြိုဟ်ခြဲ့...
ဇွန်သဉ္ဖာ Zune Thinzar ဒိလိုလုပ်တိုင်း နာမည်ကျော်ပေမယ်. ဘယ်လိုကျော်တာလဲဆိုတာ......
သူ.အကြောင်းကို ဘလော.မှာ ဇာမဏီရေးထားဖူးတာ ၂ပုဒ် ရှိပါတယ် ။ ခုကတော. ဒါရဲ. အဆက်လို.ပဲပြောရပါမယ် ။တကယ်တော.လည်း ဒီလိုပုံမျိုးတွေ တင...
အသိပညာ..အတတ်ပညာ နှင်.ရသစုံ Website & Blog များ
Myanmar Gazette News Media Forum Network
ငှဆေောငျကခဈြစဖှယျလေးမြားနှငျ့ တဈနတေ့ာ - ငှဆေောငျကိုရောကျဖူးတာ..အခုဆို (၂)ကွိမျရှိပွီပေါ့နျော..ပထမတဈခေါကျက ညီမသယျရငျး တှေ MRTV4 က presenter တှနေဲ့ရောကျခဲ့တာ။ အခုတဈခေါကျကတော့ review ရေးဖို့ ရောကျ...
Myanmar Thway (ရသစာပေ..နိုင်ငံရေး..ဗဟုသုတ..အားကစား )
ရင်နာစေတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ - အသက် ၄ နှစ် အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ဆီးရီးယားကလေးငယ်တစ်ဦးပါ။ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦးက သူ့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် အနားကပ်သွားပြီး ကင်မရာနဲ့ ချိန်လိုက်တဲ့အခါ အ...
ရှေးစာအုပ်များ..ရှေးသီချင်းများ နှင်. အစားအသောက်များ
ရှာမှရှားတဲ့ သူလိုမိန်းမ - မမေကြည်ရဲ့ လက်ရာ ဒုတိယပိုင်းပါရှင် :) ရှာမှရှားတဲ့ သူလိုမိန်းမ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ စာများကိုဖတ်လို့ စိတ်နေအထက်တန်းကျ မိန်းမပီပီ ပြည်စုံကျနတဲ့ဘ၀တွေ ဇာတ်ကောင...
မြ၀တီ - မြ၀တီ - ပြည်သူ့ အတွက် မြ၀တီ
❃ တာချီလိတ် သတင်း ❃ Tachileik News Agency ❃
ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး ရပျကြေးစာရေးတဈဦး သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျခံရ
ဦးအောင်ကြီး၏ အိပ်ဖွင့်ပေးစာများ (၁)
ကျောက်ဖြူ Youths Net
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ﻿ဒေါက်တာအေးမောင်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌ မြိတ်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ အထူးရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံ
ယုဝဟံသာ ( သဿတ်မန်)
သၜးမာန်ယျဟာ " အတ္တ "
ကျွန်မ ချစ်သော ရွှေ မန္တလေး
ခံစားမှု စာစု နှင်. ရသ ဥိးစားပေး Blog & Website များ
မင်းသီဟ (Min Thiha)
ကျောင်းများ၏ ကိုယ်ပိုင် Website & Blog များ
WELCOME TO GTI/GTC/TU MAUBIN
Graduates of Institute of Medicine II
University of Medicine 1 Yangon
Institute of Marine Technology
real-estate search engine for Myanmar
မှတ်သားလေ.လာသင်ယူဖွယ် ရပ်ဝန်း များ
မွနျမာနိုငျငံစကျမှုလယျယာဦးစီးဌာနလိုဂို - မွနျမာနိုငျငံစကျမှုလယျယာဦးစီးဌာနရဲ့ (.eps) logo မူရငျးအား ကိုယျတိုငျပွနျလညျရေးဆှဲထားပါသညျ။ လိုဂိုတဈခုလုံးအား အသေးစိတျပွနျလညျရေးဆှဲထားတာဖွဈလို့ ပွနျလညျအသ...
Phone , IT နှင်. On Line နည်းပညာများ
♪ ဖုန်းထဲမှာ Window 10 Style နဲ့လန်းချင်သူများအတွက် - SquareHome2Premium – Win 10 style v1.5.5 Apk (21-Nov)♫ - [image: Cover art] Window 10 Style လေးကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ တော်တော်လေးကိုလန်းတယ်ဗျာ။ အခုဖုန်းပေါ်မှာ Window 10 Theme လေးကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
English Lesson For U
IT နည်းပညာ ရပ်များ
ဂြိုဟ်တု..ဒုံးပျံ များနှင်. ပတ်သက်လေ.လာလိုလျှင်
နိုင်ငံတကာ အစားအစာနှင်. အိမ်အလှဆင်
စာပေ၀ါသနာရှင်များအတွက် On Line စာကြည်.တိုက်များ
သုတ ရသ စာပေ နှင်. ကာတွန်း များ Download ရယူနိုင်သည်Myanmar Ebooks
သခင်သန်းထွန်း(သို.)ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်လိုသူ - https://www.mediafire.com/?goc79508ytr8jby ပေးပို့သူ – ရဲသွေးထက်
Free-eBooks.net | Download/upload လုပ်နိုင်သော နိုင်ငံတကာ စာပေ site
2 -12-2013 မှစ၍ ၀င်ရောက်လေ.လာကြသော နိုင်ငံ များ
"Diamond Pavilion Gems and Jewellery" ရဲ့ အထူး ဈေးရောငျးပှဲ
အားကစားဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် Website များ
နိုင်ငံတကာ ပွဲအဖြေများ..သတင်းများGoal.com News -
'Old Trafford isn't intimidating anymore' - Burnley hero Wood feels Man Utd no longer haveafortress - The New Zealand striker believes the Theatre of Dreams fear factor no longer exists after the Clarets earned the three points comfortably
အာဆီယံ ဘောလုံးအဖွဲ.ချုပ် Official Home of Asian Football
The official website for European football – UEFA.com
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ.ချုပ် (MFF)
မြန်မာနှင်. ကမ္ဘာ.ဘောလုံး သတင်းများ - SoccerMyanmar.com
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အွန်လိုင်း အဘိဓါန်
English - Myanmar online dictionary
ကွန်ပြူတာ ဆိုင်ရာ များ
Desktop Wallpaper ကူးယူနိုင်သော Wallpaper များ
How to migrate your WordPress website to Cloudways for Free? - It seems like you’re runningadefault WordPress website. Well, you can easily migrate your WordPress sites over to Cloudways using our WordPress Migrator ...
www.altools.com/ဓါတ်ပုံအတွက် free softwear များ
Windows PC software downloads အကောင်းဆုံး Softwaredownload Site
သီချင်းများ Down Load ရယူရန် Myanmar Mp3 Album
မဖြစ်​နိုင်​​တော့ဘူး (TharTharCs) - မလုပ်​တာကြာပြီဖြစ်​တဲ့ ဟိုအရင်​ကပုံစံမျိုး​လေးပြန်​လုပ်​ထားတယ်​ဗျာ .. If you like don’t forget to share Thank all ✌✌ 🎙🎙🎙🎙🔹မဖြစ်​နိုင်​​တော့ဘူး🔹 Studi...
သံစဉ်လှိုင်း(မြန်မာ နှင်. နိုင်ငံတကာ တေးဂိတ vcd နှင်. mtv များ)
မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး. - Vocalists: Ye Lay, Hlwan Paing, Bobby Soxer, Aint Chit
Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနှင်.နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်များကြည်.ရှု၇န်)
The Burmese Harp (ဗမာ့စောင်း/ビルマの竪琴/ Biruma no tategoto) - Movie Link updated: ရုပ်ရှင်လင်ခ် ပြန်ပြင်ထားသည်။ July, 1943: Japan's army is on the run. A platoon in Burma sings to keep its spirit up. Inspiration come...
မြန်မာရုပ်ရှင်ကားများ vcd သီချင်းများ တိုက်ရိုက်ကြည်.ရှု၇န် Shwe Videos
Myanmar Fash Song များကြည်.ရှု နားဆင်ရန်
ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင်.အသိတရားဆိုင်ရာ Blog & Website အချို.
ဆေးပညာဆိုင်ရာ မေးလိုသည်များအတွက် Yamuna Online Clinic
Individual Health Insurance Quotes, Information and Advice
Zaburit Medicine Co.Ltd..ဆေးဝါးများအကြောင်း